Uchishandisa Technorati's API uye PHP | Martech Zone
Mugovera, Kukadzi 24, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
UPDATE: Kurume 3, 2007 - Yakaburitswa Technorati Rank WordPress Plugin.
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Zvakanaka zvinomira kuti Technorati ine muganho wezuva nezuva wekubvunza. Ndakaona nzira yakaoma, vakandivhara. Kana iwe waisa iyo widget, iwe uchaona kuti inotaura Kukanganisa ine chinongedzo kudzokera kuProject Peji kuti iwe ugone kurodha pasi uye kuitisa iyo kodhi iwe pachako. Ini ndakagadzirisa zvakare kodhi yacho kuti kana uchinge wasvika kuDaily mugove we API kufona, zvinongoshanduka kuita chinongedzo "Wedzera kune vaunofarira".
Kuva mushambadzi wepa database nekutengeserana, ndine zvikanganiso zviviri (zvakanaka… zvakawanda zvinopfuura zviviri, asi izvi zvine chekuita neichi posvo). Ini ndinoshanda nemazvo nenhamba dzezvinangwa uye ini ndinoshanda nemazvo kuronga uye zvine mutsindo kuenzanisa mapurojekiti, vanhu, software, nezvimwe. Kunyangwe mabhuku angu akarongeka (kuruboshwe rerutivi rwebhuku kesi isoftware nekusimudzira, kurudyi-kurudyi kumusoro ibhizinesi, kuzasi-kurudyi ndiko ngano).
Kukanganisa kwenhamba kunoita kuti ndirambe ndakatarisa Technorati, Google Analytics, neGoogle Adsense zuva rese, mazuva ese. Techorati ndeimwe yeaya anonyatso kuwana kufarira kwangu nekuti zvinondipa uyo ari kubatana neni. Ini ndinoda kushanyira iwo masaiti uye ndione zvavari kutaura kana izvo zvavakaona zvichibatsira. Kuti ndione kana chinzvimbo changu chachinja, zvakadaro, ini ndinofanira kutsvaga pane yangu blog.
Ini ndaida chimwe chinhu chinokurumidza saka ini ndakagadzirira zvishoma 'widget' kune Technorati's API kuwana chinzvimbo changu nekukurumidza uye nyore. Ndicho chaizvo chiri kuratidza chinzvimbo chiri pamusoro peichi chinyorwa. Kana iwe uchida kuona kuti sei, rova ​​yangu peji rechirongwa up.
Feb 24, 2007 at 2:06 PM
izvi zvinoreva here kuti ini ndinosvika pakuva wekutanga kutaura kutenda 🙂 uye ndikuzivisei kuti ini ndakakwereta izvi 🙂
Feb 24, 2007 at 8:53 PM
Borrow away, Steven! Ndozvazviri nezve iyi blog.
Kukadzi 24, 2007 na1: 25 PM
Ini ndakaita shanduko inoshandisa iyo diki Technorati logo. Yakagadzirwa chaizvo zvakanaka izvozvi. Ini ndakagadzirisa iyo kodhi peji zvakare.
Kukadzi 24, 2007 na1: 29 PM
kubata kwakanaka 🙂
Ini ndinayo iratidziro muSiti yangu Rankings mameseji widget - ine yakakodzera chikwereti hongu 🙂
Kukadzi 24, 2007 na1: 38 PM
Wow, ndicho chikwereti CHIKURU! Ndatenda, zvakanyanya. Usanzwe uchimanikidzwa kuzvichengeta ipapo. Ndine chirevo chidiki muHTML iyo inonongedzera kune iro peji rerojekiti.
Kukadzi 24, 2007 na2: 45 PM
Ndakagadzirisa saizi yemavara LOL saka inoita kunge iri nani zvishoma.
Kukadzi 24, 2007 na6: 43 PM
Ndakagadzirisa widget ine Nice turu yekushandisa iyo inopa yakawedzera ruzivo nezve yako chinzvimbo! Iri zita reBlog rako (zvinoenderana neTechnorati) pamwe neinobatanidza inbound uye mablog.
Kukadzi 24, 2007 na10: 22 PM
Zvakanaka, izvo zvakakurumidza! Parizvino ndiri kuwana kukanganisa kubva kuTechnorati:
Iwe washandisa kumusoro kwako kwezuva nezuva mugove weTechnorati API mibvunzo.
Ndichifunga izvozvo, ndashandura zvandatumira pano kuti vanhu vagamuchire kodhi voga pane kurova saiti yangu. Ndine urombo nezve izvo vanhu! Ini ndaisatomboziva kuti kwaive ne 'mugove wezuva nezuva'.
Kukadzi 24, 2007 na10: 28 PM
zvakanaka izvo zvinonyatsosveta Doug 🙂… o zvakanaka zvainakidza zvichiripo. Kunyangwe iyo sosi ichienda kunoratidza kumwe kufarirwa chaiko - pamwe Technorati ichave yaona nekuita chimwe chinhu chakafanana ivo pachavo
Kukadzi 24, 2007 na10: 43 PM
Ndinovimba saizvozvo, futi. Ndakaverenga kuburikidza saiti yavo uye handigone kuwana izvo 'mugove wezuva nezuva', zvakadaro. Zvinoshungurudza zvishoma.
Ini ndashandura kodhi yacho kuti ingopfuudza iyo yekukanganisa meseji senge yakataurwa HTML saka haina kuratidza iyo "0" yaimboita. Ikozvino ichangoratidza iyo widget kana paine mhinduro yakanaka.
Ini ndinofungidzira kubheja kwakanyanya kungave kwekutora iro sosi peji iwe pachako unogona kuzviita. Ini ndichakuchengeta iwe kana ndaona kuti chii 'zuva nezuva mugove'. Ndatenda, Steven!
Feb 26, 2007 at 12:44 PM
Ok… kumwe kugadziridza. Kana iwe ukaedza kutsvaga URL ine iyo widget isiri yangu, inokuudza kuti pane kukanganisa uye inokuunza iwe kune peji rerojekiti. Izvi ndezvekuti iwe ugone kurodha pasi kodhi uye kuitisa iwe pachako. Chero ani zvake anogona kuitisa iyi kodhi uye nenzira iyoyo haumhanye muAPI mugove wezuva nezuva.
Ini ndakagadzirisawo kuitira kuti kana iwe ukasvika kuDaily Mugove, zvinongoshandura kuita chinongedzo che "Wedzera kune vaunofarira"!
Feb 27, 2007 at 11:44 PM
Ini ndinoshamisika kuti vakomana veDapper vari kuzviita sei? Pamwe ivo vanongotarisa kamwe chete pazuva uye cache zvabuda.
Dapper Screen Kucheka chero Saiti
Zvakanaka vanhu! Ini ndanyorazve izvi zvese muWordPress plugin uye ine caching. Woohooo!
Technorati Chinzvimbo WordPress Plugin
Ndakawana chidhizaini chako chidiki cheTechnorati, kunyangwe ndaona kuti server yangu yanga isina cURL yakanyorwa apo iyo PHP5 yakaiswa.
Saka ndichaona kana ndichigona kuita kuti iyi ishande: http://samanathon.com/2007/03/10/wordpress-plugin-display-your-technorati-rank-with-php-4/ iyo iwe yawakabatsira nayo kune avo vasingashandisi PHP5 🙂
Wow, Tyler! Ini ndaiziva cURL chaive chinhu chinodiwa asi ini handina kuziva kuti vamwe vanhu vaisazove nacho kwavari. Ini ndaifunga raive raibhurari yaive yakatakurwa nekutadza nekuiswa kwePHP. Ndiri kungofungidzira - asi ini ndinobheja kuti Samanthon anoshandisa cURL futi.
Ndotenda zvikuru! Izvi zvakandibatsira kubuda mutoro.
Iye zvino ini ndinongoda kuibvarura uye inofanira kunge yakakwana
Jul 17, 2009 pa 4: 20 AM
Chero ani akawana chero zano rekuti chii chaicho muganho? Ini ndangoona nzira yakaoma zvakare kuyedza app 🙁
Jul 17, 2009 pa 4: 24 AM
Ah ndangoona kuti chi1000… oops, ndanyatsoita 1000 mibvunzo nhasi?
Jul 17, 2009 na12: 02 PM
guitarnoize - ive shuwa yekuisa imwe mhando yeiri nyore caching mashini